खुङ्खार डाँका लिम्बुमाथि प्रहरीले काठमाडौंको बीच सडकमै चलायो गोली, के छ अवस्था ? — Sanchar Kendra
खुङ्खार डाँका लिम्बुमाथि प्रहरीले काठमाडौंको बीच सडकमै चलायो गोली, के छ अवस्था ?
काठमाडौं । प्रहरीकी गाेली लागेर ‘खुंखार डाँका’ राजन लिम्बु घाइते भएका छन् । इटहरीमा आइएमईको शाखा लुटेर भागेको आरोप लागेका लिम्बुलाई पक्राउ गर्ने क्रममा प्रहरीले गोली चलाएको हो ।
प्रहरीको गोली लागि घाइते भएका उनको ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । उनको साथबाट एउटा चाइनिज पेस्तोल र चार राउण्ड गोली समेत बरामद भएको महाशाखाका प्रमुख एसएसपी धिरजप्रताप सिंहले बताए ।
गोलि चलेको ठाउँमा सडक छेउ एक थान पेस्तोल खसेको छ । त्यहाँ मुचुल्का उठाउने काम भइरहेको घटनास्थलमा रहेका प्रहरी अधिकारीहरुले बताएका छन् । प्रहरीका अनुसार घाइते भएका राजन लिम्बु ६ वटा डकैतीको घटनामा संलग्न भइ फरार रहेको भेटिएको छ ।
उनी पूर्वमा पाँचवटा ‘आइएमई’ लुटेर यस अघि नै जेल परी छुटेका थिए। त्यस्तै, कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्था लुटपाटमा उनी काठमाडौँमा पनि पक्राउ परि ६ वर्ष जेल बसेर निस्केका थिए ।
एसएसपी धिरजप्रतापका अनुसार छ महिनाअघि इटहरीमा एउटा आइएमई लुटेको अभियोगमा उनलाई प्रहरीले मोस्ट वान्टेड सूचीमा राखेर महाशाखाबाट एसपी सोमेन्द्रसिंह राठौर र डीएसपी रुगम कुँवरको टोली अनुसन्धानमा खटिरहेको थियो।
पछिल्लो पटक उनले १२ मंसिरमा इटहरीमा रहेको एक्टिभ मनी ट्रान्फरमा सञ्चालक सबिन दाहाललाई छुरा प्रहार गरेर ३ लाख रुपैयाँ लुटेका थिए । त्यसअघि ०६३ सालमा उनले रोयल कोअपरेटिभ लिमिटेडको कार्यालयमा प्रवेश गरेर ११ लाख ३० हजार रुपैयाँ लुटिएको घटनामा पनि संलग्न भएको प्रहरीको भनाइ छ ।
उनले त्यतिवेला पेस्तोल देखाएर लुटपाट गरेका थिए । ०६३ सालमै उनले एक गेस्ट हाउसको काउन्टरमा पेस्तोल देखाएर ३ लाख ६१ हजार १ सय रुपैयाँ लुटेको अपराध ममहाशाखाले जनाएको छ । उनको अवस्था खतरामुक्त रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।
तस्वीर: अनलाइन खबर